Thrombocytopenia (သွေးဥမွှား နည်းပါးခြင်း) - Hello Sayarwon
Dr.Nyan Linn မှ ရေးသားသည်။ 08/02/2018 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Thrombocytopenia (သွေးဥမွှား နည်းပါးခြင်း) ကဘာလဲ။
သွေးဥမွှား နည်းပါးခြင်းဆိုတာ ဘာလဲသွေးဥမွှားလေးများဆိုသည်မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပါက သွေးခဲရန် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရသော သွေးဆဲလ်လေးများဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့နည်းပါးနေခြင်းဆိုသည်မှာ သွေးတွင်းရှိ သွေးဥမွှားပမာဏသည် ပုံမှန်ထက် လျော့နည်းနေခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
ထိုကဲ့သို့နည်းပါးနေခြင်းသည် ကျန်းမာရေးပြဿနာတခုခု (သို့) ရောဂါတခုခု (သို့) အချို့သော ဆေးဝါးများကြောင့်လည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ အချို့သော သွေးဥမွှားနည်းရောဂါများသည် မပြင်းထန်တတ်သည့် အပြင် လက္ခဏာ လည်းသိပ်မပြတတ်ကြပါ။ သို့သော် ပြင်းထန်ပါက သွေးဥမွှားပမာဏ သည် လွန်စွာနည်းပါး၍ ခန္ဓါကိုယ်အတွင်း သွေးယိုစိမ့်မှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
Thrombocytopenia (သွေးဥမွှား နည်းပါးခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
မည်သည့် အသက်အရွယ်မဆို ကလေးလူကြီးမခွဲခြားပဲ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။
Thrombocytopenia (သွေးဥမွှား နည်းပါးခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ရောဂါလက္ခဏာများသည် သွေးတွင်းရှိ သွေးဥမွှားပမာဏအပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဆီးနှင့် ဝမ်းတွင် သွေးပါခြင်း
ပိုမိုပြင်းထန်သော ကိစ္စရပ်များတွင် ခန္ဓါကိုယ်တွင်းသွေးယိုစိမ့်မှုများ
ဖြစ်ပွားနိုင်ပြီး ဆီးနှင့်ဝမ်းထဲ သွေးပါခြင်း ဝမ်းမည်းမည်းများသွားခြင်းတို့ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ အထက်ပါ လက္ခဏာများ နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဖြစ်ပွားလျှင်သော်လည်းကောင်း
သံသယရှိ၍မေးစရာ ရှိရင်သော်လည်းကောင်း ဆရာဝန်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွှေးသင့်ပါသည်။
လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးတွင် ဖြစ်ပွားမှုခြင်းမတူ၍ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ခြင်းသည်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပေသည်။
Thrombocytopenia (သွေးဥမွှား နည်းပါးခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဤရောဂါသည် မျိုးရိုးလိုက်ခြင်း (သို့) အခြားသော ရောဂါများကြောင့် ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
ရိုးတွင်းခြင်ဆီအတွင်းရှိ ရောဂါများ ဥပမာ ကင်ဆာရောဂါများ နှင့် သွေးအားနည်းရောဂါများ
ဗီတာမင် ဘီနှင့် ဖောလစ်အက်စစ် (သို့) သံဓါတ်နည်းပါးခြင်း
ခန္ဓါကိုယ်တွင် သရက်ရွက်သည် သွေးဆဲလ်ဟောင်းများ နှင့် အန္တာရာယ်ရှိပစ္စည်းများကို ဖျက်ဆီးပေးသည်။ ထိုသရက်ရွက်မကောင်းပါကလည်း ဖျက်ရန်လိုအပ်သော သွေးဥမွှားတို့သည် သရက်ရွက်တွင် ကပ်ကျန်စုပုံကာ သွေးတွင်းရှိပမာဏအားလျော့ဆင်းသွားစေသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း နှင့် မိမိ၏ မှားယွင်းစွာ တိုက်ခိုက်နေသော ကိုယ်ခံအားစနစ်ကြောင့်လည်းကောင်း
သွေးထဲရှိ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများမှ တိုက်ခိုက်ခြင်း
အချို့သော ဆေးဝါးများ ဥပမာ ဆာလ်ဖာပါသောဆေးဝါးများ စသည်ဖြင့် သွေးဥမွှားတို့ကို ပျက်စီးနည်းပါးစေသည်။
Thrombocytopenia (သွေးဥမွှား နည်းပါးခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အချို့သော ရောဂါများ၊ကင်ဆာ နှင့် သွေးအားနည်းရောဂါများ သို့ မှားယွင်းနေသော ခုခံအားစနစ်ရောဂါများ ၊
အဆိပ်အတောက်ရှိသော ဓါတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့မှုရှိခြင်း ၊
အချို့သော ဆေးဝါးများ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျို းများ ၊
မျိုးရိုးလိုက်ခြင်း စသည့်အကြောင်းအရာများက ဖြစ်နိုင်ချေကို များစေသည်။
Thrombocytopenia (သွေးဥမွှား နည်းပါးခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်သည် ခန္ဓါကိုယ်တွင် အင်ပျင်များ နှင့် ညိုမဲစွဲအကွက်များ ရှိမရှိကို အရင်စစ်ဆေးလေ့ရှိပြီး ရောဂါရာဇဝင်အား မေးမြန်းသည်။ ထို့နောက် သွေးစစ်ခြင်း သွေးထဲရှိ သွေးဥမွှားပမာဏများအားတိုင်းတာခြင်း နှင့် သွေးခဲနိုင်မှုစွမ်းအားများအား တိုင်းတာလေ့ရှိသည်။
အယ်ထရာဆောင်း ခေါ် တယ်လီဗေးရှင်း ဓါတ်မှန် များ ဖြင့်သရက်ရွက်၏အရွယ်အစားအား စစ်ဆေး ကြည့်ရှုခြင်း
ရိုးတွင်းခြင်ဆီဖောက်၍ စစ်ဆေးကာ အတည်ပြုခြင်းများ ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
Thrombocytopenia (သွေးဥမွှား နည်းပါးခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသမှုသည် ဖြစ်ပွားသော အကြောင်းအရင်းတွင်မူတည်သည်။ အကယ်၍ အခြားရောဂါ(သို့) ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပွားပါက ဆရာဝန်က သင့်တော်သော ကုသမှုအား တခုစီအတွက် ပေးလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သွေးဥမွှားသည် အလွန်အမင်း နည်းပါးနေပါက သွေးသွင်းခြင်း (သို့) သွေးဥမွှားများ အစားပြန်သွင်းခြင်း ၊ သရက်ရွက်အား ခွဲစိတ်ဖြတ်ထုတ်ခြင်း ၊ မှားယွင်းနေသော ကိုယ်ခံအားကို ဖိနှိပ်အားနည်းစေသော ဆေးများဖြင့် အန်တီဘော်ဒီများကို လျော့ပါးစေခြင်းစသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
မည်ကဲ့သို့သော အနေအထိုင်ကောင်း အလေ့အကျင့်ကောင်းများက သွေးဥမွှားနည်းပါးခြင်းအား ကောင်းမွန်စေသနည်း
အသုံးပြုသော ဆေးဝါးများ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအား သတိထားခြင်း သတိပြုခြင်း။
http://www.healthline.com/health/thrombocytopenia#Outlook6. Accessed July 24, 2016.
Thrombocytopenia (low platelet count).
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/thrombocytopenia/basics/lifestyle-home-remedies/con-20027170. Accessed July 24, 2016.
http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/thcp/atrisk. Accessed July 24, 2016.